SoonLink ARS သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူ 2.Engage, ကျောင်းသားများ
SoonLink ARS ၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ?
1.2.4GHz အကြိမ်ရေကြိုးမဲ့, လိုအပ်မျှ WIFI;
မီတာ 100 အထိ 2.Long အကွာအဝေးဆက်သွယ်ရေး။
paring များအတွက် 3.NFC ။
သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ် 4.Classic မြင်ကွင်းဒီဇိုင်းနှင့်စုံစုံစစ်ဆင်ရေး interface ကို။
နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက် excel အဖြစ် 5.Instant, တိကျသောရလဒ်များနှင့်လည်းမှတ်တမ်းတင်ထား။
အသုံးပြုသူစွမ်းရည်၏ 6.No န့်အသတ်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးအသုံးပြုခြင်း၏ 7.Wonderful အတွေ့အကြုံကို။
အမှန်ပင် 8.Low စျေးနှုန်း။
တစ်ဦးကို real-time ကြိုးမဲ့ပရိသတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုစနစ် (ARS) ကဘာလဲ?
တစ်ဦးက Real-time ပရိသတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုစနစ်ကတစ်ဦးအလယ်ပိုင်း processor နဲ့ဗဟိုအဘို့ကိုကာအခြေစိုက်စခန်းဘူတာရုံများနှင့်တုန့်ပြန် data ကိုရိုက်ထည့်ပါသတိပေးခံရခံရဖို့ဖြေဆိုသူများအတွက်ကြိုးမဲ့တုံ့ပြန်မှုယူနစ်တစ်ခုဗဟုနဲ့ဝေးလံခေါင်သီသောအဘို့ကိုဘဲဖြေဆိုသူတစ်ဦးဗဟုကနေဒေတာတွေကိုစုဆောင်းဘို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြား monitor ပေါ်မှာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြစေခြင်းငှါသို့မဟုတ် taped စေခြင်းငှါအရာတစ်ဦးအမြင်အာရုံသိမြင်နိုင်သော display ကိုရန်။ အဆိုပါ display ကိုမျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုပါဝင်နိုင်သည်။ ဗဟို Processor ကိုထူးခြားတဲ့လိပ်စာရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့်တုံ့ပြန်မှုဒေတာ, အဝေးလံသောယူနစ်နှင့်အတူ optical သို့မဟုတ် acoustic ဆက်သွယ်ရေးလင့်များ, စုပုံနိုင်သည်။ ဗဟို Processor ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်စုဆောင်းတုံ့ပြန်မှု data တွေကိုဖော်ပြပေးနှင့်လုပ်ငန်းများ၌တုံ့ပြန်မှု data တွေကိုမွမ်းမံနှင့်ဖြေဆိုသူပြ display ကိုအစပြုစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ SoonLink ARS အဘို့အဘယ်သို့အသုံးပြုသောဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
အဆိုပါ SoonLink ARS မဲနှင့်ကွန်ဖရစစ်တမ်းတွေ့ဆုံသင်ကြားမှုအပြန်အလှန်အပါအဝင်အသုံးပြုမှု၏အကွာအဝေးအဘို့စုံလင်သည်။ သူတို့ကအစတက်ရောက်သူန်ထမ်းသင်တန်း, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးပြဿနာအပေါ်မဲပေးသို့မဟုတ်လူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, SoonLink ARS မှသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းဘယ်အချိန်မဆိုထိုသို့ပြုမှစုံလင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ SoonLink ARS အဘယ်အရာကိုများထားရှိရေးသလဲ?
အဆိုပါ SoonLink ARS ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပါရှိသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ (2000 အထိ) ကြိုးမဲ့ keypad နှင့်ကြိုးမဲ့လက်ခံကာကို USB cable ကိုတစ်ဦးအခြို့သောအရေအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ software ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စအတွက်အပြေး system ကို Microsoft က Windows သို့မဟုတ် Mac OS ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို keypad အလုပ်လုပ်သလဲ?
SoonLink ကြိုးမဲ့မဲပေးခလုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်၏အရွယ်အစားန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ keypad တစ်ခုအတန်းထဲတွင်လူတစ်ဦးစီတစ်ဦးညီလာခံသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအားပေးနေကြသည်။ အဆိုပါ pads ပြည့်စုံတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူမည်သည့်မေးခွန်းများကိုဖို့တုံ့ပြန်မှုဖမ်းယူတစ်ဦးကို USB cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်-size ကို wireless receiver ကိုဆကျသှယျ။ ဒါဟာလူအစုအဝေးတို့ကဦးဆောင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလုံးဝအမည်မသိတုံ့ပြန်မှုဘို့ခွင့်ပြုအဖြစ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုစုသိမ်းရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်ကိုလည်း collated နီးပါးချက်ချင်းပြသလျက်ရှိသည်။ ဒါကမဲပေးသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်စုရုံးမဆိုလက်စွဲစာအုပ်နည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။
Adress: ROOM တွင် 1407, Kingem ထောက်လှမ်းရေးအဆောက်အဦး, Liuxian လမ်း, Nanshan ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်
E-mail ကို: Marketing@mysoonlink.com
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. pcb assembly CNC Rapid Prototyping Products Guide - Featured Products - hot Tags: - Sitemap.xml - AMP Mobile